Motokari uye mota dzevarume | Stylish Varume
Varume vazhinji, kunyangwe paine zvimwe zvinosarudzika, isu tinowanzove ne rudo chairwo rwezvose zvine injini uye mavhiri mashoma, saka zvaive zvakakosha kuti mune ino kona kwatiri kwaive nenzvimbo yakatsaurirwa kumota iyo yataigona kunakidzwa sevana chaivo.
Pano iwe unogona kuzviwana iwe kubva nhau dzichangoburwa kubva kumota yenyika, kuzvinyorwa zvinonakidza nezve mota dzakanakisa, midhudhudhu kana zvese zvinogona kuve neinjini uye izvo zvinogona kuzonakidza mune imwe nzira.
Iwo akanakisa emota dzeGerman mhando
kubudikidza Ignatius Room inoita 3 mwedzi .
Kutaura nezveGermany kwagara kwakafanana nekutaura nezvemhando dzemotokari dzeGerman. Kusiyana nedzimwe nyika dzeEurope,…
Ndarasa makiyi emota yangu uye handina kana kopi
Kune akawanda kesi matiri kuzoshandisa mota yedu uye chero chikonzero chatisina…
Dzazvino matekinoroji mumidhudhudhu michina
kubudikidza Stylish Varume inoita 1 gore .
Nyika yemidhudhudhu iri kuchinja nekukurumidza, kwete chete maererano nemastaera uye saizi, asi zvakare nemitemo ...
Dzakanakisa mota munyika
kubudikidza Alicia tomero inoita 2 makore .
Dai taifanirwa kusarudza mota dzakanakisa pasirese, zvirokwazvo mufananidzo wedu unozoonekwa mumitambo yemitambo, neyavo ...
Mhando dzakanakisa dzemitambo yemotokari
Isu tinoziva kuti mitambo yemitambo yakagara ichikwezva kutariswa kwemaitiro avo uye mashandiro emugwagwa. Pane zvakawanda…
kubudikidza Paco Maria Garcia inoita 4 makore .
Kune ese marudzi ese ezvirango, ayo ari maitiro ehutongi kumatareji emigwagwa anogadzirwa. Kana iko kukanganisa kuri ...
Kuchengeta mota yako munguva yechando
Mwaka unotonhora wegore unogona kukuvadza mota. Mushure mezvose, kupisa kwakanyanya kwazvo ...
Nzira yekudzivirira sei mota yako kubva kuchitonhora?
kubudikidza Paco Maria Garcia inoita 5 makore .
Nguva yechando yasvika. Neche tembiricha yakaderera, mamwe matanho anofanirwa kutorwa kudzivirira edu mota kutambura ...
Ndeapi mavhiri emota yako akakodzera?
Kana mota yako ichida shanduko yemavhiri, uye uine kusahadzika nezve akakodzera pane, pane zvakawanda zvakasiyana zvaunazvo ...
Unofanira kuchinja rinhi mavhiri emota yako?
Chikamu chakakosha chese chinhu chakakomberedza kuchengetedzeka nemotokari yako mamiriro emavhiri….
Ungachengetedza sei mafuta mumota yako?
Ndedzipi nzira dzakakodzera kuchengetedza mafuta mumota mako? Pfuma yemafuta mumota yako imwe ...
Maitiro ekugadzirisa iyo navigator yemota
Tricks yekudzivirira girazi kuti rirege kupera
Nzira yekuita sei 100% hydraulic gozvo?